राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा सागर र विनोद पनि पर्न सफल !
भदौ ०३, २०७५ बिगुल
काठमाडौं – विकेटकिपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी र अलराउन्डर सागर पुनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पुनरागमन गरेका छन् । एसिया कप छनोटको लागि पारस खड्काको कप्तानीमा घोषणा गरिएको १५ सदस्यीय नेपाली टोलीमा विनोद र सागरले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका हुन् ।
विनोद र सागरले २०१७ डिसेम्वरमा डब्लुसिएलअन्तर्गत युएईसँग खेलेयता राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका हुन् । निरन्तर खराब प्रदर्शन गरेपछि नामिबियामा गत फेब्रुवरीमा भएको डिभिजन–२ देखि यी दुई खेलाडी टिम बाहिर रहेका थिए । जसमध्ये शक्ति गौचनले अन्तर्राष्टिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरिसकेका छन् । नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको एक दिवसिय श्रृखंलाको पहिलो खेलमा चोट लागेपछि शरद भेषावकर पनि यो टोलीमा परेनन् ।
नेपालले यही अगष्ट २९ देखि सेप्टेम्वर ६ सम्म मलेसियामा हुने एसिया कपमा युएई, हङकङ, ओमान, मलेसिया र सिंगापुरसँग खेल्नेछ । राउण्ड रोविनपछि शीर्ष दुई टिमबीच फाइनल हुनेछ । विजेताले एसिया कप खेल्न पाउनेछ । नेपाली टोली आगामी सोमवार ३ अभ्यास खेल खेल्न श्रीलंका प्रस्थान गर्नेछ । अभ्यास खेलपछि टोली त्यतैबाट अगष्ट २७ मा मलेसिया जानेछ ।
प्रकाशित : आइतबार, भदौ ०३, २०७५१२:४९
एशियाली खेलकूद : नेपालले प्राप्त गर्यो अर्को एक सफलता, नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश !
यी हुन् मेस्सी र रोनाल्डोलाई पनि पछाडी परेका विश्व फुटबलका ५ उत्कृष्ट स्ट्राइकर !
स्कटल्याण्ड बलर खेलमा हावी: नेपालको लज्जास्पद र चिन्ताजनक स्थिती
के सलाह फेरी चम्केलान ?
खेलाडी छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट : एन्फा